Koobka FA: Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor wareega afar dhamaadka - teles relay
Koobka FA: Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor wareega quarter-finalka
By bryanekobe Last updated Juun 28, 2020
Muddo 114 maalmood ah ka dib guushii shanaad ee Manchester United ee ka dhacday Derby County 5-tii Maarso, FA Cup-ka ayaa Sabtida dib u bilaabaya iyadoo ah kii ugu horreeyay ee wareega quarter-finalka Premier League.
Ciyaartii Norwich City ee ay 12 United ku guuleysatay Carrow Road (17:30 p.m. BST) - ciyaar aad toos uga daawan karto BBC One - ayaa muujineysa soo laabashadii tartankii, oo la joojiyay cudurka faafa ee coronavirus. .
BBC ayaa sidoo kale muujineysa Newcastle United inay ka soo horjeeddo goolhayeyaasha kooxda Manchester City - mid ka mid ah seddexdii barbar dhac ee Axadii.
Marka yaa joogaya tartanka caanka ah? Labadee sideed koox ee haray ayaa raadinaya inay guuleystaan ​​markii ugu horeysay? Goorma ayaa la sameynayaa isku aadka wareega semi-finalka goorma ayaana la ciyaarayaa? Ma jiraan dib-u-habeyn?
Halkaan, BBC Sport ayaa kuu sheegaysa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato iyadoo FA Cup uu isku diyaarinayo inuu ku laabto.
Maxay tahay sababta ku-meel-gaarka ah ee bisha Juun?
Isku aadka wareega quarter-finalka ayaa dhacay Maarso 4 iyadoo afarta kulan ay markii hore loo qorsheeyay Maarso 21 iyo 22.
Dhammaantood dib ayaa loo dhigay ka dib markii la joojiyay kubbadda cagta England sababtuna tahay daacuunka 'coronavirus'.
FA ayaa ku dhawaaqay dhamaadka bisha May jadwalka ku meel gaarka ah laga bilaabo Juun 27 ilaa 28, iyadoo dhammaan xiriiryada harsan ee xilli ciyaareedkaan laga ciyaari karo albaabada xiran.
Tartanku wuxuu qayb muhiim ka ahaa jadwalka kubbada cagta Ingiriiska muddo ku dhow 150 sano, waxaanan jeclaan lahayn inaan uga mahadceliyo maamulka fulinta Premier League iyo naadiyaasha taageeradooda jadwalka kulamada haray intii lagu jiray muddadan aan caadiga aheyn. madaxa fulinta ee FA. Mark Bullingham.
Abaalmarinta FA Cup
Caddadka koox kasta
Ku guuleystayaasha rubuc-dhamaadka £ 720,000
Guuldareystayaasha semi-finalka £ 900,000
Ku guuleystayaasha semi-finalka £ 1,8m
Ciyaartaan Finalka FA Cup £ 1,8m
Ku guuleystayaasha FA Cup £ 3,6m
Goorma ayaa la sameynayaa isku aadka wareega iyo halka ay joogaan semi-finalka iyo finalka?
Isku aadka wareega semi-finalka ayaa dhici doona waqtiga nus-dhamaadka ee kulanka wareega quarter-finalka ee Newcastle ay la ciyaareyso Manchester City maalinta axada, kaasoo si toos ah looga baahin doono BBC One.
Weeraryahankii hore ee kooxda Newcastle Alan Shearer, oo qeyb ka noqon doona kooxda BBC ee St James 'Park, ayaa soo bixi doona waxbadan.
Sababta oo ah qawaaniinta fogeynta bulshada, martida BBC iyo soo-bandhigaha Gary Lineker waxaa laga dejinayaa ugu yaraan laba mitir midba midka kale iyo shaqaalaha.
Kabtankii hore ee Ingriiska Shearer ayaa noqon doona qofka kaliya ee maamula kubbadaha inta lagu gudajiro isku aadka, iyo dhamaan kubadaha iyo aaladaha ka hor isku aadka ayaa si buuxda loo baabiin doonaa.
Semi-finalka, oo lagu ciyaari doono Wembley, wuxuu dhici doonaa dhamaadka usbuuca Juulaay 18-19, iyadoo finalka Sabtida 1da Agoosto uu ka dhici doono Wembley - lix maalmood ka dib maalinta ugu dambeysa xilli ciyaareedka Premier League. 26-ka Luulyo. .
Finalka xilli ciyaareedkaan ayaa dib loogu magacaabi doonaa finalka koobka loo yaqaan 'Heads Up FA Cup' si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan caafimaadka maskaxda.
Manchester City ayaa bilaabaneysa ka dib markii ay 6-0 kaga adkaatay Watford 18-2019 kulankii Wembley XNUMX-kii May, XNUMX
Ma jiraan dib-u-habeyn?
Ma jiraan wax qabasho ah oo ku saabsan marxaladan tartankan.
Haddii ciyaartu ay heer ahaato 90 daqiiqo ka dib, waxaa jiri doona 30 daqiiqo oo dheeraad ah oo waqti dheeri ah.
Ganaaxa ganaaxa ayaa dhici doona si loo go'aamiyo guuleystaha haddii ciyaartu weli ay heer tahay 120 daqiiqo.
Yaa ka tagay?
Toddobo boqol iyo soddon iyo lix iyo soddon koox ayaa soo galay tartankan xilli ciyaareedkii hore, FA Cup ayaa ka bilaabanaya Agoosto 9, 2019 iyadoo wareega hore ee horudhaca ah la ciyaari doono.
Laba koox oo aan horyaalka aheyn - Hartlepool United iyo AFC Fylde - ayaa gaarey wareegii saddexaad, halka lixdii koox ee aan Premier League aheyn ee ugu dambeysay laga reebay wareega shanaad.
Norwich City, oo ah kooxda ugu hooseysa, iyo Leicester City ayaa ah labada naadi ee kaliya ee ku guuleystay FA Cup-ka, halka Arsenal iyo Manchester United ay ku guuleysteen 25 jeer.
Norwich (martigelinaya Man Utd, Sabtida 17:30 p.m. BST)
Position - 20aad Horyaalka Premier League. Ku guuleystayaasha FA Cup - 0 La markii ugu dambeysay oo la gaarey quarterfinals-ka - 1992. Maxaa dhacay? Norwich City ayaa gaartay semi-finalka markii labaad afartii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay ka dib markii ay garaacday Southampton ka dib soo kabsasho, ka hor inta aysan guuldarro 1-0 ka soo gaarin kooxda Sunderland semi-finalka ka dhacay Hillsborough.
Sidee Norwich gaadhay rubuc-meeloodyada
Kuwa iska soo horjeeda
Wareega saddexaad Preston (maqan) 4-2
Wareega afaraad Burnley (fog) 2-1
Wareega shanaad Tottenham (maqan) 1-1 (waxaay ku badiyeen 3-2 qalin)
Carqalad ka badan caawimaadda? Qeybta hoose ee miiska Premier League oo leh 28 kulan oo la ciyaaro, Canaries ayaa heysan waqti ay kaga badbaadaan inay si dhaqso leh ugu soo laabtaan Championship. Si kastaba ha noqotee, waxay ku raaxeysanayaan tartankoodii ugu fiicnaa ee FA Cup muddo 1994 sano ah. Markii ugu dambeysay ee Norwich iyo Manchester United ay ku kulmaan tartankan waa wareegii afaraad ee 2, Red Devils ayaa 0-XNUMX ku garaacday Carrow Road, iyadoo ku guuleysatay koobkaas xilli ciyaareedkii.
Koobka FA Cup: Tottenham Hotspur 1-1 Norwich City (2-3 qalin)
Tirakoobka muhiimka ah: Norwich ayaan wax guul ah gaarin 3dii kulan ee ugu danbeysay ee ay ku ciyaaraan FA Cup (D4 L4) tan iyo markii ay 1-2012 kaga badiyeen Burnley bishii Janaayo XNUMX.
Manchester United (maqnaanshaha Norwich, Sabtida 17 p.m. BST)
Boostada - kaalinta shanaad ee Premier League. Ku guuleystayaasha FA Cup - 12 jeer. Markii ugu dambeysay oo la gaarey rubuc-koobyada - 2019. Maxaa dhacay? Daafaca Victor Lindelof ayaa la siiyay kaar casaan ah halka kooxda Ole Gunnar Solskjaer ay guuldarro 2-1 ka soo gaartay kooxda Wolves ee Molineux.
Sidee Man Utd u gaartay rubuc-dhamaadka
Wareega saddexaad Wolves (fog) 0-0
Ku celceliska wareega saddexaad Wolves (guriga) 1-0
Wareega afaraad Tranmere Rovers (bannaanka) 6-0
Wareega shanaad Gobolka Derby (bannaanka) 3-0
Koobkii ugu horreeyay ee Solskjaer? Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku guuleystay FA Cup labo jeer isagoo ciyaaryahan ka ahaa United, laakiin noorwiijiga ma ku guuleysan doonaa tartan isagoo tababare ah? United kuma aysan guuleysan koob weyn tan iyo sanadkii 2017 markaas oo ay ku guuleysteen League Cup iyo Europa League isla xilli ciyaareedkii Jose Mourinho.
Iron Biby, Koala iyo Zango, seddexda horyaal ee ku riyooda…
Kubadda Cagta: CAN ee Cameroon waxaa dib loo dhigay 2022 sababtoo ah…
Falanqeynta Kulamada FA Cup: Derby County 0-3 Manchester United
Tirakoobka muhiimka ah: Manchester United ayaa ka qeyb geleysa wareega sideed dhamaadka FA Cup-ka xilli ciyaareedkii lixaad oo xiriir ah, in kastoo ay u gudbeen semi-finalka labo ka mid ah shantii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
Sheffield United (kooxda martida loo yahay Arsenal, axada 13:00 p.m. BST)
Position - kaalinta sideedaad ee Premier League. Ku guuleystayaasha FA Cup - 4 jeer. Markii ugu dambeysay oo la gaarey rubuc-koobyada - 2014. Maxaa dhacay? Blades ayaa ahaa koox Ligue 1 ah markii ay 2-0 kaga badiyeen Charlton si ay finalka Wembley uga badiyaan Hull City, oo ay ku garaaceen 5-3.
Sidee Sheff Utd u gaadhay rubuc-dhamaadka
Wareega saddexaad AFC Fylde (guriga) 2-1
Wareega afaraad Millwall (fog) 2-0
Wareega shanaad Akhriska (banaanka) 2-1 (waqti dheeri ah kadib)
Iftiiminta sharafta? Horay ayey u aheyd xilli aan caadi aheyn oo ay kooxda Blades ku soo laabato Premier League xilli ay raadineyso boos ay ka hesho Yurub. Waxay ku dhamaan doontaa koob weyn? Sheffield United iyo Arsenal ayaa wada ciyaaray FA Cup bishii Maarso 2005 intii lagu gudajiray wareega shanaad. Kadib barbaro goolal la’aan ah, Gunners ayaa ku badisay 4-2 rigoorayaal ka dhacay Bramall Lane.
Koobka FA: Akhriska 1-2 Sheffield United Highlights
Tirakoobka muhiimka ah: Kulankaan waa kii 35-aad ee uu qabto macalinka Blades Chris Wilder sida FA Cup-ka uu u yahay mid sax ah, laakiin kaliya wuxuu ahaa kiisii ​​labaad ee uu ka horyimaado koox Premier League ah - Sheffield United waxaa 1-0 kaga badiyay Leicester City wareega shanaad. 2018.
Arsenal (waxaa ka maqnaanaya Sheffield United, axada 13:00 p.m. BST)
Position - kaalinta sagaalaad ee Premier League. Ku guuleystayaasha FA Cup - 13 jeer (rikoor). Markii ugu dambeysay oo la gaarey rubuc-koobyada - 2017. Maxaa dhacay? Beat Lincoln City oo aan ahayn horyaal 5-0 ah oo wadada guusha ku gaadhay guuldaradii Chelsea ee finalka, iyada oo u soo gaadhay semi-finalka kooxda Man City.
Sidee Arsenal ay u gaartay wareega XNUMXda
Wareega saddexaad Leeds United (guriga) 1-0
Wareega afaraad Bournemouth (fog) 2-1
Wareega shanaad Portsmouth (fog) 2-0
Gunners miyeey heli doontaa guushii 14aad? Ma jiro koox ku guuleysatay FA Cup wax ka badan Arsenal. Guulihii ugu dambeeyay 13koodii guulood ayaa yimid 2017 markii Aaron Ramsey uu gool soo daahay ka dhaliyay Chelsea si uu uga dhigo Arsene Wenger koobkiisii ​​XNUMXaad ee FA Cup.
Koobka FA: Portsmouth 0-2 Falanqeynta Arsenal
Tirakoobka muhiimka ah: Arsenal ayaa horumar sameysay ilaa 13 ka mid ah 15kii kulan ee ugu dambeysay ee wareega afar dhamaadka FA Cup.
Leicester City (oo ku soo dhaweyneysa Chelsea, Axada 16 p.m. BST)
Position - Kaalinta seddexaad ee Premier League. Ku guuleystayaasha FA Cup - 0 La markii ugu dambeysay oo la gaarey quarterfinals-ka - 2018. Maxaa dhacay? Waxaa looga badiyay 2-1 kadib waqti dheeri ah oo gurigooda ah oo ay la galeen kooxda Chelsea, oo koobka ku guuleysatay.
Sidee Leicester u gaartay rubuc-dhamaadka
Wareega saddexaad Wigan (guriga) 2-0
Wareega afaraad Brentford (fog) 1-0
Wareega shanaad Magaalada Birmingham (guriga) 1-0
Finalkii ugu horeeyay ee FA Cup muddo 51 sano ah? Waxay u ahayd xilli aan caadi u aheyn Leicester xitaa haddii aysan wali badin kulan tan iyo soo laabashadooda horaantii bishaan. Kooxda loo yaqaan 'Foxes' ayaa sifiican loogu haray inay u soo baxaan Champions League markii ay yihiin labo guul oo ay ka gaaraan finalka FA Cup markii ugu horeysay tan iyo 1969, markaasoo 1-0 looga badiyay Manchester City.
Koobka FA: Leicester City 1-0 Birmingham City Highlights
Tirakoobka muhiimka ah: Leicester City ayaa raadineysa inay gaaraan semi-finalka FA Cup markii ugu horeysay tan iyo xilli ciyaareedkii 1981-82 - waxaa laga ciribtiray wareega sideed dhamaadka FA Cup ilaa markaas.
Chelsea (Leicester, Axadda 16:00 p.m. BST)
Position - kaalinta afaraad ee Premier League. Ku guuleystayaasha FA Cup - 8 jeer. Markii ugu dambeysay oo la gaarey rubuc-koobyada - 2018. Maxaa dhacay? Guuldaro Leicester 2-1 kadib waqti dheeri ah oo ay ku guuleysato tartanka iyadoo guul ka gaartay Manchester United finalka.
Sidee Chelsea ay u gaartay quarterfinals
Wareega saddexaad Nottingham Forest (guriga) 2-0
Wareega afaraad Hull City (fog) 2-1
Wareega shanaad Liverpool (guriga) 2-0
Koob loogu talagalay Lampard xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay? Ka dib markii ay ka cirib tirtay Liverpool wareega hore, Chelsea ayaa qiyaasi doonta fursadaha ay ku dhameysan karto xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee Frank Lampard isagoo koob kula qaadaya xulka. Chelsea ayaa laga badiyay kaliya labo ka mid ah 20kii kulan ee u danbeysay ee ay ka horyimaadeen Leicester tartamada oo dhan (W13 D5 L2), in kasta oo ay guul gaareen afar ka mid ah Foxes (D3 L1).
Koobka FA: Chelsea 2-0 Liverpool ayaa soo muuqatay
Tirakoobka muhiimka ah: Kani waa wareega 18-aad ee FA Cup-ka ee kooxda Chelsea waqtigii Premier League (ilaa 1992-1993), in ka badan kooxaha kale. Waxa ay sare mariyeen lix ka mid ah toddobadii kulan ee u dambeysay, halka guuldarro ay ka soo gaartay kooxda Everton sanadkii 2016.
Newcastle United (oo martigelin doonta Manchester City, axada 18:30 p.m. BST)
Position - 13aad Horyaalka Premier League. Ku guuleystayaasha FA Cup - 6 jeer. Markii ugu dambeysay oo la gaaro rubuc-qarniyo - 2006. Maxaa dhacay? Guuldaro 1-0 ah oo ka soo gaartay Chelsea, natiijadii ayaa soo gabagabeysey rajadii uu Captain Shearer ka lahaa inuu koob kula guuleysto Newcastle.
Sidee Newcastle u gaartay quarterfinals
Wareega saddexaad Rochdale (bannaanka) 1-1
Ku celceliska wareega saddexaad Rochdale (guriga) 4-1
Wareega afaraad Oxford United (guriga) 0-0
Akhrinta wareega afaraad Oxford United (bannaanka) 3-2 (waqti dheeri ah kadib)
Wareega shanaad West Brom (fog) 3-2
Magpies waxa ay heysataa taariikhdeeda ugu fiican ee FA Cup muddo 14 sano ah, lagumana adkaan seddex ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeysay ee ay garoonkeeda kula ciyaareen Manchester City. Weeraryahanka Paraguay Miguel Almiron ayaa dhaliyay goolal ka badan FA Cup goolal ka badan ciyaaryahan kale oo Premier League ah xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay afar gool lix darbo oo la beegsaday tartankan.
Koobka FA: West Brom 2-3 Nagala Soo Saaray Newcastle
Tirakoobka muhiimka ah: Newcastle United ma aysan gaarin semi-finalka FA Cup tan iyo 2004-05 marka loo eego Graeme Souness.
Manchester City (maqnaanshaha kulanka Newcastle, axada 18 p.m. BST)
Position - kaalinta labaad ee Premier League. Ku guuleystayaasha FA Cup - 6 jeer. Markii ugu dambeysay oo la gaarey rubuc-koobyada - 2019. Maxaa dhacay? Swansea ayaa ku soo jiidatay 2-0 ka hor inta uusan seddex gool dhalin 19ka daqiiqo - oo uu ku jiro gool uu dhaliyay Sergio Aguero daqiiqadii 89aad - markii ay ku guuleysteen.
Sidee Man City u gaartay quarterfinals
Wareega saddexaad Dekada Vale (soo dhoweynta) 4-1
Wareega afaraad Fulham (guriga) 4-0
Wareega shanaad Sheffield Wednesday (maqan) 1-0
Koobabka Qaranka ee Magaalada? Ka dib markii ay ku guuleysteen Carabao Cup wax yar ka hor ganaaxii kubbada cagta, Manchester City ayaa si fiican loo meelaynayaa inay ku dhammaystirto laba koob oo qaran ah. Laakiin sidee ayay u sameyn doonaan hadii uusan helin gooldhaliyaha gooldhalinta Sergio Aguero, kaasoo qaliin jilibka looga sameeyay?
Koobka FA: Sheffield Wednesday 0-1 Soo koobitaankii Manchester City
Tirakoobka muhiimka ah: tan iyo markii ay guuldarro ka soo gaartay Wigan Athletic wareega afaraad ee FA Cup bishii Febraayo 2018, Manchester City ayaa guuleysatay sagaalkii kulan ee ugu dambeysay ee FA Cup iyadoo wadar ahaan ay wadartahay 35-4.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore on: https://www.bbc.com/sport/football/53152134
Scampi Xilliga Xagaaga oo la Yaanyo Yaanyada iyo Cuntada Furuqa - New York Times
Xanta dhimashada Kim Jong-Un: Muuqaalada xiisaha leh ee Wasiirka difaaca ee Japan
MLS waa soo laabatay: Sidee horyaalku, ciyaartoygu ula qabsanayaan walaacyada COVID-19 ee Florida
Iron Biby, Koala iyo Zango, waa seddexda horyaal ee riyooda ka dhiga Burkina Faso
Kubadda cagta: CAN ee Cameroon dib loo dhigay illaa 2022 sababo la xiriira coronavirus
Geremi Njitap: "Walaacyada kubbadda cagta Afrika waa badan yihiin"